ပိန်သောသူများ အတွက်ရည်ရွယ်၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ပိန်သောသူများ အတွက်ရည်ရွယ်၍
Posted by ခင်ခ on Nov 15, 2012 in Health & Fitness | 37 comments
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် တစ်ချို့ကပိန်သည်၊ တစ်ချို့က ၀ သည်ဟူ ၍ ကွဲပြားလာကြပါသည်။
ထိုသို့ကွဲပြား သလို လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလဲ ကွဲပြားသောခံစားချက်များ ကိုယ်စီ ရှိနေကြပါသည်။ ပိန်တဲ့သူက ၀ချင်သည် ၀တဲ့သူကပိန်ချင်သည်။ အခု ပိန်တဲ့သူရဲ့ဝ ချင်တဲ့ စိတ်အဟာရ ပြည့်သွားအောင် မြန်မာ့တိုင်းရင်း
ဆေးပညာ နဲ့လေ့လာ ဓါတ်စာ စားကြည့်ရအောင်၊ လူရယ် လို့ဖြစ်လာရင် လူတစ်ယောက်မှာ ဓါတ်ကြီး လေးပါးနဲ့ တည်ဆောက်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါသည်။ ဓါတ်ကြီးလေးပါး ဆိုသည်မှာ အရပ်သုံးစကား ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာမှာတော့ ဓါတ်ကြီး ငါးပါးဖြစ်ပါသည်။ အရပ်ထဲက ဓါတ်ကြီးလေးပါးမှာ ပထ၀ီဓါတ်၊ အာပေါဓါတ်၊ တေဇောဓါတ်၊ ၀ါယောဓါတ် တို့ ဖြစ်ပြီး၊ မြန့် မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာ မှာရှိတဲ့ ဓါတ်ကြီး ငါးပါးမှာ ပထ၀ီဓါတ်၊ အာပေါဓါတ်၊ တေဇောဓါတ်၊ ၀ါယောဓါတ်၊ အာကာသဓါတ် ဆိုပြီး အာကာသဓါတ် တစ်ခု တိုးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အခု ပိန်သူကို ၀ စေမည်ဖြစ်သော ဓါတ်စာအကြောင်းပြန်ဆက်ပြောပါ့မယ်၊ အရပ်စကားသုံး ဖြစ်တဲ့ဓါတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ ပဲ ရှင်းပြပေးပါ့မယ်၊ အရင်ပြောချင်တာ က လူသားတွေ မှာ အပူလို့ ခေါ်သော ဥဏှစွမ်းအင် ၊ အအေးလို့ခေါ်သောသီတစွမ်းအင် ညီမျှသော စည်းချက်ညီသည့် စွမ်းအင်နှစ်ခု နဲ့ အသက် ရှည်ရပ်တည်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ထိုစွမ်းအင်နှစ်ခု မှာ အပူလို့ခေါ်သောဥဏှစွမ်းအင်သည် များလျင် လူသားကို ပိန်စေပြီး၊ အအေးဟုခေါ်ဆိုသော သီတစွမ်းအင်များလျင် လူသားကို ၀စေသည် လို့မြန်မာ့တိုင်းရင်း ဆေး ပညာမှာဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အပူစွမ်း အင် (ဥဏှ)သည် လူသား၏ကိုယ်ထဲတွင် တေဇောနှင့်
၀ါယောဓါတ်ကိုလွန်စေသောကြောင့် လူကို ပိန်စေခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ အအေးစွမ်းအင်(သီတ)သည် လူသား၏ကိုယ်ထဲ
တွင် ပထ၀ီဓါတ်နှင့် အာပေါဓါတ်ကိုလွန်စေသောကြောင့် လူကိုဝစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဆိုရင် ပိန်တဲ့သူတွေမှာ
အပူစွမ်းအင် ဓါတ်စာများဖြစ်သော ပူစပ်သောအစာများအစားများလို့ ပူခါးသောအစာများအစားများလို့ ဆုံးဖြတ်
ချက်ချနိုင်ပါသည်။ ၀တဲ့ သူတွေကတော့ အအေးစွမ်းအင်များဖြစ်သော အေးချိုစိမ့်သောအစာများအေးချိုစိမ့်
ဖန်ဖြစ်သောဓါတ်စာများ စားလို့ ၀ခြင်းဖြစ်ပါသည်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပိန်နေလို့ဝချင်တယ်ဆိုရင် သီတပထ၀ီစာများ ဖြစ်သော အေး၍ ချိုစိမ့်သောအ
စာများ များများစားပါ ၊ သီတအာပေါစာများဖြစ်သော အေး၍ ချိုဖန် ချိုစိမ့်ဖန် ဖြစ်သောအစာများ များများစား
ပါ၊ စုပေါင်းလို့ သီတပထ၀ီအာပေါ ဓါတ်စာများမှာ ဖေါ်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါးမျိုးစုံ၊ ၀က်သား ၊ဘဲသား၊
ဘဲဥ၊ ရေကြက်၊ငါးဥများ၊ ကြက်ဥ၊ဖွတ်ဥ၊လိပ်ဥ၊ထန်းမြစ်၊ငှက်ပျောသီးမျိုးစုံ၊ပဲနီလေး၊ပဲရာဇာ၊အာလူး၊ပြောင်းဖူး၊
ပဲကြား၊နွားနို့ ၊ ကျွဲ နို့ ၊ဆိတ် နို့ ၊ထောပတ်၊ နနွင်းမကင်း၊ကိတ်မုန့် မျိုးစုံ၊ဖာလူဒါ၊ချိုစိမ့်သောမုန့်များ၊ ပလာတာ၊
ပေါင်မုန့် ၊ ကြံရည်၊ သကြား၊ထန်းလျက်၊သခွါးသီး၊ဘူးသီး၊ကျောက်ဖရုံသီး၊ဘူးညွန့် ၊ကျောက်ဖရုံညွန့် ၊ကန်ဇွန်း
ရွက်၊ မုံလာဥ၊ ကိုက်လန်၊ဂေါ်ဖီများဖြစ်ပါသည်။ ထိုဓါတ်စာများသည် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြင့် လူကို
၀အောင်စားသောက်ရသောဓါတ်စာများဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အဆိုပါဓါတ်စာများစားနေစဉ် အစပ်စားချင်
လျင် ငရုပ်သီးစိမ်းများကို စားသောက်နိုင်ပါသည်။ အဓိက ၀စေသောဟင်းလျာမှာ ၀က်သားဟင်း၊ငါးကြင်း
သား ၊ဘဲသား ၊ ဘဲဥ ၊ကြက်ဥ ၊နွားနို့ ချိုချို ဖျော်သောက်ခြင်း၊ကိတ်မုန့်များဖြစ်ပါသည်။ ပိန်နေသူများ ၀ချင်လျင်
အထူးရှောင်ရသော ဓါတ်စာမှာ ငရုပ်သီးခြောက်အစပ်မှုန့်များဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ ဓါတ်စာများကို နားလည်သွားပါလျင် ပိန်နေ၍ ၀ချင်သူများ မိမိဘာသာရွေးချယ်
စားသောက် တတ်မည်ဖြစ်သည်။ အစားကိုမှန်မှန်စားခြင်း နှင့် အိပ်ရာစောစောဝင်ခြင်းသည် လည်းလူကိုဝ
စေပါသည်။ အိပ်ရေးပျက်များလျင်လည်း လူကိုပိန်စေပါသည်။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ဖော်ပြပါဓါတ်စာများကို
စားလျင် အမှန်တကယ် တဖြေးဖြေးဝလာပါလိမ့်မယ်၊။ မုန့် ဟင်းခါးကြိုက်လျင် ငရုပ်သီးမထည့်ပဲ စားပါက လူ
ကိုဝစေပါသည်။ အခုလောက်ဆို ၀ချင်သူများ အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်ပါသည်။
၀တဲ့သူတွေပိန်စေတဲ့ နည်းလမ်းတွေဘဲ ရေးနေကြတာ ပိန်တဲ့သူတွေ ၀စေတဲ့နည်းလေးရော မရှိဘူးလားလို့ မေးဖူးသောသူများအတွက် ရေးသားမျှဝေလိုက်တာပါ။
ပိန်လည်း မပိန်ချင်သလို ၀တုတ်ကြီးလည်း မဖြစ်ချင်ပါဘူး…
ဇရာလည်း ထောင်းနေပြီဆိုတော့ ထိန်းနိုင်သလောက်တော့ ထိန်းနေရမှာပေါ့လေ…
ဖတ်ရင်း စားစရာ စာ၅ကြောင်းဆက်ဖတ်လိုက်ရတာ မောပြီး အစားအသောက်တွေပါ
ဦးဆုံးကွန်မန့်ပြုသူ ခင်ခပိုစ့်တွေမှာ ကွန်မန့်လေးတွေအမြဲပေးတတ်သူ နှင်းနှင်းရေ အလွန်ပင်ကျေးဇူးတင် မိပါတယ်။ ခင်ခ ဒီရွာထဲမှာ ကျန်းမာရေးပညာပေးပိုစ့်ရေးတာ သိမ်မကြာမှီ အဆုံးသတ်တော့မှာမို့ အရင် ပိုစ့်တွေပြန်ဖတ်ရင်း ပိန်တဲ့သူတွေအတွက်ရော ၀ အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးမရှိဘူးလားလို့ မနှောဖြူလေး မေးခဲ့ဘူးတာတွေ့လို့ အကြွေးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို မျှဝေရေးလိုက်တာပါ။
နှင်းနှင်းကလည်း မန့်တတ်ရင် အမြဲဝင်မန့် ဖတ်ရှု့အားပေးနေပါတယ်…
မနှင်းနှင်းရေ ခင်ခ ဂျီတော့လိပ်စာက KhinKha39@gmail ပါ။ အခြား သရော်စာတွေ၊ ခင်ခရဲ့ အတွေးပါးပါး အရေးများတွေတော့ တစ်ခါတရံရေးဖြစ်မှာပါ။
ညလုံးပေါက်မအိပ်ဖြစ်ဘူး၊ ညမအိပ်လို့ နေ့အိပ်တယ်မထင်နဲ့
ပိန်သူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ဆိုလို့ ဝင်မဖတ်တော့ဘူးလို့ပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိန်အောင်မလုပ်နိုင်လို့ ဘေးနားက လူတွေကို ဝအောင်လုပ်မဲ့ အကြံကြီးကြီး ကြံသွားပါရဲ့။
P chogyi ရေ အိပ်ရေးပျက်ပါများရင်ပိန်စေတယ်ဆိုတာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကြောင့် အိပ်ရေးတွေပျက် အစားတွေမမှန်တဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံရင်ပြောတာပါ၊ ပုံမှန်စားသောက်နေတဲ့သူကတော့ လုံလောက်တဲ့အိပ်ချိန် မပြည့်ဝခြင်းသည်လည်း လူကို ၀စေပါတယ်၊ ခွင့်ယူပြီးနားလိုက်တဲ့လဆိုရင် ပိန်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ အိပ်ချိန်လုံလောက်ပြီး ပုံမှန်စားလို့ဖြစ်မှာပါ။ လူတစ်ယောက်သည် ၆-၈ နာရီ အတွင်းအိပ်ချိန်ရှိဖို့လိုအပ် ပါတယ်၊ ၀ ဖို့ ပိန် ဖို့ထက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်မှု့အရပါ ဒါမှလည်း သွေးသားလည်ပတ်မှု့ကောင်းစေပါတယ်ဗျ။
တော်သေးတယ် မခိုင်ဇာရဲ့ လက်လှမ်းမှီရာဘေးမှာကျွန်တော်မရှိနေလို့၊ ဒီပြင်ဆို ဒီထက်ဝလာရင် မလွယ်လောက်တော့ဘူးဗျ။ အကြံဆိုးနဲ့ဝင်ဖတ်သွားတာကိုလည်းကျေးဇူးပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်ပြောရင် ၀ ခြင်းသည်မကောင်းတာမို့ နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားပြီး တိုက်တွန်းပါလို့တော့ ခင်လို့ပြောပါရစေ။
ကျေးဇူးပါ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် – Ko Khin Kha ရေ ….. ကျုပ်အတွက် တော့ “ဒီထက် ပို ၀” ဖို့ လိုအပ် တာ မို့ … ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ ……..။
ခညား လိုဘဲ ….
ကျေးဇူးပါ ဦးခင်ခကြီး …
ကျွန်မအကောင့်က linnseesar22 ပါရှင်
လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်အထိ ဘယ်လိုဝအောင်လုပ်ရမလဲလို့ ၀ဝေမယ့်နည်းလမ်းတွေပဲ ရှာခဲ့ပါတယ် ..
အခုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါပြီ ..
ဘယ်လိုနည်းတွေက ပိန်စေလဲလို့ ပိန်နည်းတွေကိုပဲ လေ့လာနေရပါတော့တယ် …
ငါးမျိုးစုံ၊ ၀က်သား ၊ဘဲသား၊ဘဲဥ၊ကြက်ဥ၊ငှက်ပျောသီးမျိုးစုံ၊အာလူး၊ပြောင်းဖူး၊ဖာလူဒါ၊ချိုစိမ့်သောမုန့်များ၊ ပလာတာ၊ပေါင်မုန့် ၊ ထိုဓါတ်စာများ များများစားပေးပါ ဟင်းအဖြစ်ချက်ရင် ငရုတ်သီးသိပ်မထဲဘဲ ချက်စားပါ အားလူးကိုမျိုးစုံလုပ်စားပါ။ အချဉ်အစပ်တော့ အဲဒီအချိန်မှာခဏမစားဘဲထားပါ၊ မနေနိုင်ရင် ငရုတ်သီး စိမ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကို ပုံမှန်ချိန်လေးလုပ်ပြီးစားပေးလို့ အိပ်ချိန်ကိုလည်း ပုံမှန်လေးအိပ်ပေးပါ ကိုယ်လိုသလောက်အတိုင်းအတာလေး ၀လာရင်တော့ ခါတိုင်းစာနေကြပြန်စားပေါ့
ဒါပေမယ့်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် မိန်းခလေးတွေဟာ အသက် ၃၀ အရွယ်အတွင်းရှိတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ အသက် ၃၀ အရွယ်ကျော်ရင် ပုံမှန် ၄- ၇ ပေါင်တွင်း တိုးသွားတတ်တယ်နော်။ အဲဒါနဲ့လဲချိန်ဆပါအုံး မနန်းတော်ရာသူရေ။ အကောင့်ကို invite လုပ်ပေးပါမယ့်။
မဝေရေ အရွယ်ပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်၊ အသက်အရွယ် ၄၀ ကျော်လာရင် ၀တာမကောင်းဘူးဗျ၊ အဲဒီအရွယ်နောက်ပိုင်းဆို တဖြေးဖြေး အရိုးတွေရဲ့ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဟာ တဖြေးဖြေးခန်းခြောက်လာတတ်တယ်၊ အဲဒီမှာ လူက၀ရင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထမ်းထားရတဲ့ ဒူးတွေ၊ ခြေဖနောင့်၊ ခြေမျက်စိနေရာတွေမှာ နာကျင်လာတတ်တယ်၊ အဲလိုဖြစ်ရာကနေ တစ်ချို့လေဘက်နာတို့ အဆစ်အမြစ်ကိုက်တာတို့
ဖြစ်တတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ၀ ချင်တာကိုအားမပေးချင်ပေမယ့် မေးထားတာလေးရှိလို့ ပြန်ဖြေရင်းပိုစ့် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ပိန်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၀တာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းကျန်းမာမာလေး ရှိစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
အသက် ၃၃… အထီးကျန် ဆန်တုန်းပဲ… (အမယ်.. ဘယ်ဒူ သိတာမှတ်လို့ )
ပိန်နေတုန်းပဲဗျာ.. ဥကေ ပြောတဲ့ အေး၍ ချိုစိမ့်သောဓာတ်စာများကို မှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ
ဒါဖစ် အသက် ၃၀ကျော်တဲ့အထိစောင့်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားပဲ။
ကျေးဇူးပါကိုခင်ခရေ ညီမလဲပိန်တဲ့အထဲပါတယ် ကိုခင်ခပြောတဲ့ဝစေတဲ့အစားအစာတွေ
ကြိုက်မှကြိုက်မက်မက်မောမောကိုစားဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ အစ်ကိုရာ6လွှာမှာနေလို့လား
julliescezer12@gmail- invite လုပ်ထားတယ်နော်
jullies cezer ရေ အသက်အရွယ်ကြီးရင် ပိန်တာကောင်းတာမို့ အရမ်းမ၀ချင်ကြစေချင်ပါ။
ဂျီတော့လိပ်စာ အသိပေးရိုက်ရင် ( .com ) မထဲ့လည်းရတယ်၊ အဲလိုထဲ့ရင် လင့်ဖြစ်တတ်လို့လေ။
ဒါပေမယ့် အတွေးတွေအရေးတွေအကုန်မရပ်သေးဘူးဆိုသဖြင့် ၀မ်းသာမိပါကြောင်း..။
မရွှေကြည်ရေ မဖတ်မဖြစ်ဖတ်သွားတာသိရလို့ ၀မ်းသာမိပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးပိုစ့်တွေ မရေးတော့ တာကလည်း လတ်တလော အခြားအကြောင်းလေးတွေကြောင့်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ကြုံ ရင်တော့ ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။ ရွာထဲကိုတော့ လည်ဖြစ်ရောက်ဖြစ်မယ်လေ။ ခင်ခက ရွာကိုခင်တာကိုး။
၀နည်းလေး ဖော်ပြလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ခုစားရမယ့် အသား ငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အလျဉ်းသင့်သလိုစားရင် ၀မှာပေါ့နော်။ ၀က်သားက မစားတော့ ကျန်တာတွေ မျှစားလို့ရပါတယ်။ သမီး လေ့ကျင့်ကြည့်ဦးမယ်။ နည်းနည်းလေးဝလာရင်လည်း မဆိုးပါဘူး။ သေချာမှတ်သွားပြီရှင့်။
ကျွန်တော်တစ်ခါရေးတင်ဖူးတဲ့ ၀ သောသူများအတွက် ပိန်နည်းပိုစ့်မှာ သမီးမေးခဲ့တဲ့ ပိန်သောသူများ ၀ စေတဲ့နည်းမရှိဘူးလားလို့ ရှိရင်ပြောပေးပါဆိုတာလေးကိုပြန်ဖတ်မိလို့ ရေးတင်ပေးလိုက်တာလေ။
၀င်ရောက်ဖတ်ပြီးအားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါ မနှောရေ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် အတော်အသင့်လောက်ဘဲ ၀ စေတာအကောင်းဆုံမို့ ချင့်ချိန်လို့တော့ စားသုံးပါလို့။
အမ်..အခုလေးတင် ကိုခင်ခကနေ ဦးခင်ခ ဖြစ်သွားပြီ…
နာမည်ကြည့်ပြီး တော်တော် အသက်ကြီးသွားသလိုပဲ…
ကိုခင်ခပဲ ဆက်ခေါ်သွားပါမယ်… ဦးခင်ခ ရှင့်
စိတ်ချမ်းသာလို သဘောတော်အတိုင်းပါဘဲ နှင်းနှင်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်အတွက် ပြဿနာမရှိပါဘူး။
ခင်ခက အာလုံးသူသဘောဆန္ဒအတိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေချင်သူပါ။
လေးခရဲ့ ပို့ စ်ထဲမှာ
ကျုပ်ရဲ့ ဝနည်းလေးတစ်ခုကို ဝင်ကြေငြာကပ်ရရင်ဖြင့်
တစ်နေ့ ကို ၊ အထူးသဖြင့် ညနေပိုင်း ၅နာရီနဲ့ ၆နာရီကြားပေါ့
နံပြား (သို့ မဟုတ်) ချပါတီ ၂ချပ်လောက်နဲ့ဆိတ်စွပ်ပြုတ် + အရိုးအရွတ်ခြင်ဆီများပါ တစ်ပွဲ
အဲဒါကို တစ်ပတ် ကို ၅ရက်လောက် ပုံမှန်ဆွဲပေးရုံပါပဲ
အဲဒီလို စားမယ်ဆိုရင် ၊ မဝမှာ ၊ ဝိတ်မတက်မှာ လုံးဝ စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး
အဲ ဆရာပေရဲ့ နောက်တစ်နည်းပေါ့ မှတ်ထားပြီနော်၊ နောက်ကျရင် မျှဝေရေးတဲ့အခါ သုံးမလို့လေ။
ဒီမှာဖြင့် ၀လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အထဲ။
ပိန်တာကို ၀အောင်လုပ်ဘို့ မခက်ပေမယ်။
အဲတော့ မ၀ချင် နဲ့။
ကျနော်ကတော့ နာမယ်အတည်ပေးလိုက်ပြီ နော်
Dr.3K တဲ့လား ဆရာကြီးပေါက်ရေ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ မခေါ်လိုက်ပါနဲ့ ။ ကျွန်တော်က ဆရာဝန်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျ၊ ဖတ်မှတ်ဖူးတဲ့ စာပေတွေကို မျှဝေရေးရုံမို့ စာကယ်ရီသမားအဆင့် လောက်ဘဲရှိတာပါဗျ။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ
အခုလိုကျန်းမာရေးစာတွေ အတော်ရေးနေဖြစ်လို့ အခုခက်နေရတဲ့အထဲမှာဗျို့။
ပိန်တဲ့သူက ၀ ချင် .. ၀ တဲ့က ပိန်ချင် ..
ဂျူးမတို့က မပိန်မ၀ ဆိုတော့ နတ်က အလိုလိုက်ထားတယ်ထင်ပါ့ …
0 နည်းလေးတော့ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ … ပိန်သောသူများအတွက် မျှဝေပေးပါမယ် ….
ဒါဆိုရင် မပိန်မ၀ ကြည့်လိုလှ
မမ မဂျူးမ ပေါ့နော်။
ဂျူးမရဲ့ အဘွားကတော့ ပြောဘူးတယ် လေးခင်ခရဲ့ ….
ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် မလှ ဘူးတဲ့ …
မိတ်ကပ်မလိမ်းတတ်တဲ့ တောသူစစ်စစ်လေ …
ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခရေ ။ နတ်သမီးကတော့ အသီးအရွက်နဲ့ ပဲမျိုးစုံတွေကို စားပေမယ့် အချိုအစိမ့် လုံးဝမစားလို့လားမသိပါဘူး။ အခုအချိန်ထိ ၀ မလာသေးဘူး။
ရှိသင့်တဲ့ကြွက်သား.. အဆီတွေ.. ရှိသင့်တဲ့နေရာရှိအောင်.. အားကစားလုပ်..အားထုတ်ကြပါလို့..
ပိန်တယ်ဆိုပြီး.. ဗိုက်ကလေးထွက်.. ဖင်ပြား..ရင်ကပ်နေတာမျိုးမဖြစ်စေလို..
အဆီမရှိချပ်ရပ်တဲ့ဗိုက်.. ဖွံ့ဖြိုးတဲ့..ရင်..တင်.. စသဖြင့်ရှိစေလိုတာပါ..
ပိန်နေရင်.. ကြွက်သားထွက်အောင်ရှိအောင်လုပ်သင့်ပါကြောင်း..။ :528:
သူကြီးရေ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘိုဘိုဟန်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးသတိရသွားတယ်။
ဒီလိုဒီလို ပိန်တယ်ပိန်တယ် ပြားချပ်ချပ်
ဒါကိုပင် မက်မပြေ မက်မပြေ
ပိန်တာဟာ တစ်မျိုးချစ်စရာ ပိန်စမ်းပါစေ
ခင်ဗျားတို့လည်းဘဲ ဘယ်နယ့်လဲဗျ ပိန်တာလေးဘဲ ရွေးရွေးကြိုက်——တဲ့လေ။
ပိန်တာနဲ့ ၀တာမှာ ပိန်တာက အရွယ်သုံးပါးစလုံးအတွက် ကောင်းမွန်စေပါ၏။
‘ ပိန် ချင် ရင် တစ် ပတ် ၂ ရက် ကျင့် ကြံ ရမယ့် ကိုယ် တွေ့ နည်း လေး ‘
‘ ဟို တစ် လော က ပေါ့ ‘
(၁) အိမ်က သဘောမတူတဲ့ သင်တန်းတွေပဲ ကိုယ့်ပိုက်ပိုက်နဲ့ ရွေးတက်ပါ။
(အာခံခြင်းမဟုတ်..သူများမထိခိုက် ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကိုယ်လုပ်ခြင်း )
***တစ်နေကုန် မိုးလင်း၊မိုးချုပ်သင်တန်း တစ်ပတ် ၂ရက်ဆို လုံလောက်ပါသည်***
(အိမ်က သဘောမတူလို့ လိုက်မပို့တော့ အငြိမ့်သား အိမ်ကားစီးပြီး မသွားရပါဘူး)
၉၆၉၃ နဲ့ တက္ကစီထွက်ငှား၊ ကပ်စီးကုပ်တဲ့နေ့ အပင်ပန်းအဆင်းရဲခံ ဘတ်စ်
၂ဆင့်၊၃ဆင့် စီးပြီးပြန်။ နှစ်ခုလုံး လမ်းဝေးဝေးလျှောက်ရ၊ကားတိုးကြိတ်စီးရ၊ပင်ပန်းရလို့
ကယ်လိုရီတွေ အတော်လောင်ကျွမ်းစေပြီး ၀ိတ်ကျစေပါတယ်။
ကုန်ကျစာရင်းကြီးကြည့်၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံတွေ အတော်ကုန်ရတဲ့ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်း
၀ိတ်ကို အတန်အသင့် ကျစေမှာပါ
(၂) တစ်ပတ်၂ရက်ထဲဆိုတော့ သင်တန်းချိန် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြိုးစားရလို့
သင်တန်းချိန်မှာ အစာစား နည်းပါတယ်(၀ိတ်ကျစေခြင်း)။
ပဲနို့တစ်ဘူး(စက္ကူဘူး)၊ ပေါင်မုန့် ၁လုံး(အလုံးသေး တစ်ယောက်စာ) (သို့)
့အိမ်လုပ် sandwich တစ်ခု၊ ရေတွေ လှိမ့်သောက်နဲ့ပဲ ညနေစောင်းအထိ ပြီးသွား
ပါတယ်။ (ညဘက်တော့ ထမင်းမစားရလို့ဆိုပြီး အများကြီးတော့ အပီစားနဲ့ပေါ့လေ)
၃လလောက် တစ်ပတ် ၂ရက် အဲ့လို မရိုးနိုင် ‘ ပဲနို့၊ပေါင်မုန့်အတွဲ’ စားပြီးသကာလ
နံပါတ် (၁) ပါ ပေါင်းပြီး ၁၁၈ ပေါင် ကနေ sweet 16 ပေါင်ချိန်မီဖို့ ၄ပေါင် အလို
အထိတောင် ကျသွားပါတယ်…၈ပေါင်(၁၁၀ထိ) ပေါ့ …၃ပတ် ၂ပေါင် နှုန်းပေါ့ရှင်..
သာမန်အချိန် ၁ပတ်ကို သဘာဝအတိုင်း ၁ပေါင်ကျဖို့တောင် အတော် အဆာငတ်ခံ
ပိန်ပေမယ့် ဆာတဲ့ဒဏ် မခံနိုင်လို့..၁ခါ ပိန်ကြည့် ပွဲပြီး၏………
‘ ခု တစ် လော ကိုယ် တွေ့ တော့ ‘
အခုတော့ သင်တန်းတစ်နေကုန် တစ်ပတ် ၂ရက်လည်း နားနေတာ ၄လလောက်
ရှိနေပြီမို့ နဂိုနေအတိုင်း ပြန်ရောက်သွားပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေရပါကြောင်း
***** ၀ဖို့လွယ်လျက်..အပိန်ခက်လို့…ပိန်နေသူများ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ
ပိန်တာဝတာထက် မိမိသွေးထဲမှာ အဆီဓာတ်ဆိုတဲ့ ကော်လက်စရော များတာ မများတာက ပိုအဓိက ကျပါတယ် နှင်းနှင်းရေ ၊ မိမိသွေးထဲမှာ မလိုလားတဲ့ ကော်လက်စရော အဆီများနေရင် အဲဒါက လူကိုဒုက္ခ ပေးစေတာ၊ တစ်ချို့က ၀ပေမယ့်အဲဒီ ကော်လက်စရော သွေးထဲနည်းလို့ ကျန်းမာပါကြောင်းဗျာ။
မိန်းကလေးတွေ အတွက်တော့ မြင်ရတဲ့အလှအပကလည်း အရေးကြီးသမို့ လိုတာထက်